Qubanaha » Finland ayaa tijaabinaysa in mishaar la siiyo dadka shaqo la’aanta ah.
Finland ayaa tijaabinaysa in mishaar la siiyo dadka shaqo la’aanta ah.
Jan 16, 2017 - jawaab
“Waan la yaabay makaan helay warqada, waana ka shakisanaa” ayay sheegtay Liisa Ronkainen, oo ka mid ah 2,000 oo reer Finland ah oo loo doortay in ay dowladda ku tijaabiso habkan oo dadka shaqo la’aanta lagu siinayo mishaar.
Iyadoo shaqo la’aan ahayd muddo lix bilood ah ayay Liisa, oo 26 sano jir ah waxay raadinaysay shaqo laakiin waxba ma aysan helin.
“Inta aan shaqo la’aanta ahay ayaa la i siinayaa lacag ka badan €36 bishii, mishaarkan la tijaabinayo oo ah €560. Waligay fikradan inay fiican tahay ayaan aaminsanaa, inkastoo ay fiican tahay in laga mid ahaado dadka la doortay in lagu tijaabiyo fikradan.”
Mishaarka aasaasiga ayaa dhowr jeer lagu taliyay inuu yahay hab lagu yarayn karo waqtiga ay qaadato lacagta la siiyo dadka shaqo la’aanta ah iyo saboolnimada.
Laakiin waxa ugu muhiimsan ee ay hayadda Finland ee caymiska bulshada ee Kela, ay u tijaabinayso mishaar aan canshuur laga goyn oo dhan €560, oo la siinayo dadka aan shaqaynayn ayaa ah in mishaarka uu dadka u horseedo inay doontaan shaqooyin waqti kooban ah.
Finland ayaa leh 213,000 oo qof oo shaqo la’aan ah, taasoo ka badan waddamada kale ee dariska la ah.
Habka lacagta lagu siiyo dadka shaqo la’aanta ah ayaa marar badan dadka ku dhiiri galinayn inay doontaan shaqooyin lacag yar, sababtoo ah lacagta ay shaqo la’aanta ku qaataan ayaa laga goynayaa markii ay shaqo helaan.
“Halkii euro ee walba ee uu qofku helo wuxuu ka go’aya lacagta shaqo la’aanta lagu siiyo,” ayuu sheegay”Olli Kangas, oo ah madaxa xiriirka bulshada ee hay’ada caymiska bulshada ee Kela.
“Mararka qaarkood dadka shaqo la’aanta ayaa ka baqaya in laga jaro lacagta shaqo la’aanta mustaqbalka, haddii ay helaan shaqo waqti kooban ah.”
Image captionOlli Kangas ayaa u arka in tijaabadan labada sano ay tahay oo kaliya bilawga sida Finland uu uga shaqayn karo mishaarka dadka la siinayo
Fikrada ka danbaysa tijaabada mishaarka dadka la siinayo waxay tahay, qofka lacago kale waa ay soo gali karaan.
” Dowladda ayaa doonaysa inay aragto inay suurtogal tahay in la baabi’iyo ugu yaraan waxa ugu xu ee dadka ka hor istaaga inay shaqo raadsadaan,” ayuu yiri Mr Kangas.
Meelaha kale ee laga tijaabinayo habkan
Switzerland ayaa afti ku diiday in dadka qaangaarka oo dhan la siiyo mishaar bishii June 2016
Afar magaalo ee dalka Holland – Groningen, Tilburg, Utrecht iyo Wageningen – ayaa ka qayb qaadanaya tijaabadan
Gobolka Canada ku yaalla ee Ontario ayaa samayn doona tijaabadan.
Magaalooyinka Schotland ee Fife Glasgow ayaa sidoo kale tijaabdan smayen doona.
2,000 ee qof oo shaqo la’aanta ah dalka Finland ee tijaabada ka qayb qaadanaya ayaa qaadan jiray lacagta shaqo la’aanta oo wax yar ka yar mishaarka hadda la siinayo ee ah €560.
Farqiga u dhexeeya ayaa ah inay lacagta helayaan iyagoon aan buuxin Foomam iyo inay lacagta helayaan haddii ay shaqo helaan labada sano ee socota iyo hadii kaleba.
Liisa Ronkainen, inay raadsato shaqo waqti gaaban ah ayaa hadda u ah fikrad aad u fiican.
“Hadda waxaan helayaa mishaar dheeraad ah haddii aan shaqo helo, inaan aad isku dayo inaan shaqo helo ayaa suurto gal ah” ayay sheegtay.
Image captionDadka ay dooratay Kela ayaa da’dooda ay tahay 25 ilaa 58